Ny tranonkala manaraka ny WWDC an'i Apple dia mavitrika izao | Avy amin'ny mac aho
4 andro sisa tavela mandra-pahitantsika ny CEO an'ny orinasa Tim Cook, eo amin'ny sehatra indray hanokatra kaonferansa ho an'ny mpamorona izay loharanom-baovao lehibe indrindra amin'ny haino aman-jery manampahaizana manokana.
Ny marina dia ny fisoratana anarana ho an'ireo mpampiasa tvOS sy iOS izay te hanaraka ny vaovao rehetra, ny fandaharam-potoanan'ny kaonferansa ary ny vaovao hafa mifandraika amin'izany dia efa nisy ny fampiharana azy ireo nanomboka ny talata tolakandro teo. Ankehitriny dia anjaran'ny tranonkalan'ny Apple ny miomana amin'ny hetsika manokana ary efa miasa am-piandrasana ny fanombohan'ny keynote izy io.
Ity tranonkala ity dia ao amin'ny pejin'ny Apple ihany ary amin'ny Alatsinainy dia hanomboka handefa izay rehetra mitranga ao amin'ny Bill Graham Civic Auditorium any San Francisco Alatsinainy ho avy izao manomboka amin'ny 19:XNUMX hariva any Espana. Mba handefasana ny hetsika tsy misy olana ny fahatapahana na ny mety hilatsaka ateraky ny isan'ny mpampiasa izay hifandray amin'ny fiandohan'ity fehezanteny ity, Apple dia efa vonona ny mpizara azy. Lasa ireo fampisehoana Apple izay nahitana aretin'andoha ho an'ny mpampiasa ny fidinana, ny fanemorana na ny fahatapahana amin'ny haino aman-jery.
Saingy tsy ny zava-drehetra no mihena amin'ny teny fototra amin'ny alatsinainy ho avy izao. Na dia daty fanombohan'ny WWDC aza, mitohy mandritra ny herinandro ny kaonferansa, fivoriana, lahateny ary hetsika hafa ho an'ny mpamorona. hatramin'ny 17 jona rehefa tapitra ny hetsika. Ny vahiny, ny injeniera ary ny mpamorona manatrika ny hetsika dia ho mpiorina mandritra ny herinandro natokana ho an'ireo rafitra fiasa samy hafa izay ananan'i Apple ankehitriny.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Ny tranonkala manaraka ny WWDC an'i Apple dia miasa ankehitriny
RescueTime, ilay mpiara-miasa tonga lafatra mba hampitomboana ny fotoananao